Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia – Page 32 – Marqaannews
January 11, 2020 marqaan 0
Guddoomiye ku xigeenka Maxkamadda Sare ee Puntland, Nuur Ciise Maxamed oo u waramay warbaahinta Puntland, ayaa faahfaahin ka bixiyay sababta keenta in aan weli la fulin xukunkii lagu riday seddax [Read More]
Degdeg Akhriso:- MD Xaaf oo qaadacay Xildhibaanada Cusub ee Galmudug kuna dhawaaqay war culus oo ka dhan ah Villa Somalia.
Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa war ka soo saaray liiska xildhibaanada Galmudg ee shalay looga dhawaaqay magaalada Dhuusamareeb, kuwaas oo gaaraya 63 xildhibaan. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska [Read More]
Degdeg:- Dowlado uhanjabay Iiraan iyo Kuwo kale oo ka dalbaday Malaayiin dollar oo Mag-dhaw ah.
Dawlada Iiraan ayaa shaaca ka qaaday in ciidamadeeda difaaca cirka ay ay si aan ku talagal aheyn ugu dhufteen gantaal diyaaradii rakaabka ee Arbacadii lasoo dhaafay ku dhacday magaalda Tehran. [Read More]
Boqorkii badali lahaa Sulkaankii Cumaan ee geeriyooday ayaa la shaaciyay.
Haitham bin Tariq Al Saciid oo ay ilma adeero yihiin Suldan Qabuus ayaa loo doortay inuu noqdo hoggaamiyaha cusub dalka boqortooyada Cuman, sidda ay ku warantay wakaalada wararka AFP. Haitham [Read More]
Magaalada New York afhayeenka Qaramada Midoobay Stephane Dujarric ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka mid noqotay 7 dal oo ka mid ah Qaramada Midoobay oo u dhaw in ay waayaan [Read More]
Sultan Qaboos bin Saciid Al Saciid oo ahaa boqorkii dalka Cumaan ayaa geeriyooday, isaga oo ay da’diisu tahay 79 jir. “Anaga oo aad uga xun ayaa waxay boqortooyada u murugoonaysaa [Read More]
Degdeg:- Iiraan oo qiratay in ay soo riday Diyaaradii Rakaabka ee Ukrainian waxayse samaysay balanqaad cajiib ah.
Militariga Iran ayaa waxay sheegeen in “si aan ula kac ahayn oo kamaa ah ” ay u soo rideen diyaarad rakaab oo laga lahaa Ukrainian,sida uu baahiyay telefishinka qaranka Iiraan. [Read More]
DAAWO VIDEO Sir Culus Gantaalkii Ku Dhacay Diyaarada Hawada Iran?
January 10, 2020 marqaan 0
Xiisada Bariga Dhexe oo Maal mahani salka Ku haysa taliyahii sare ee Iran ee Maraykanka Diley Ayaa hada U Muuqanaysa Inay isku Badashey Dhanka Diyaarada Yugrayn ee Dalka Iran lagu [Read More]
DAAWO:- Muuqaal cusub oo muujinaya Diyaaradda oo ku dhacayo Gantaal ayaa la helay + Shakigii oo run ku dhaw.
Muuqaal muujinaya in “diyaaradda uu madfac ku dhacay” oo ay faafiyeen warbaahinta Mareykanka. Dowladda Iran wey beenisay arrimahaas ah in diyaaradda uu ku dhacay gantaal ay ciidamadeena rideen. Diyaaradda ay [Read More]
kudhawaad 30 qof oo lagu dilay weerar lka dhacay dal kuyaal Africa.
Xarun milateri oo ku taala Niger ayaa weerar ay ku qaadeen kooxa xagjir ah waxa ku dhintay 25 qof. Weerarka ayaa ka dhacay xarun milateri oo ku taala galbeedka Niger, [Read More]
Dowladda Iiraan oo si adag isaga Fogaysay eedeyn kaga timid qaar kamid ah dalalka Caalamka
Ra’iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in warbixinada ay sirdoonka sheegayaan ay tahay in Iiran ay gantaal ku dhufatay diyaaradii laga lahaa dalka Ukraine [Read More]
Dalka Australia oo uu ka bilaawday qax baahsan xilli dab wali uu ka holcayo meelo badan.
Dawladda Australia ayaa bilowday in meelaha u dhaw kaymaha ay dabku ka holcayaan in ay ka daad gurayso dadkii degaanaa. Waxaa heegan buuxa la geliyay militeriga dalkaasi iyo dad gaar [Read More]
Iiraan oo lagu eedeeyay in ay Gantaal ku dhufatay Diyaaradii laga lahaa Ukrain ee burburtay.
Warar soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in gantaal ay ridday dawladda Iran ay soo ridday diyaaraddii todobaadkan dhexdiisa ku dhacday dalka Iran. Gantaalka ayaa waxaa la sheegay in laga [Read More]
Madaxwayne Farmaajo oo safar degdeg ah u aaday dal ku yaal Geeska Africa.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada Asmara ee caasimadda u ah dalka Eriteria. Madaxweynaha iyo xubno wafdi ah oo safarkiisa ku wehliya ayaa waxaa magaalada [Read More]
Muxuu yahay Muranka ka taagan Sharciga Batroolka Somalia? “Dowladda Federaalka ayaa ka hadashay”.
Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxa ay mar kale ka hadashay hindise sharciyeedka Batroolka dalka, kaas oo ay meel labada aqal ee Baarlamaanka dalka. Sharcigan ayaa markii la ansixiyay kadib [Read More]
Trump oo laga hor istaagay inuu weeraro Iiraan “werar inuusan qaadin ayay ansixiyeen Aqalka Sare”.
Aqalka kongreska ee dalka Mareykanka ayaa u codeeyay qaraar lagu xadidayo awoodda milateri ee madaxwyene Trump uu u leeyahay in uu dagaal ku qaado Iran. Qaraarkan ayaa waxaa isku raacay [Read More]
DAAWO+AKHRISO:- Liiska Xildhibaanada Galmudug oo maanta si rasmi ah loogu dhawaaqay xilli wali uu jiro khilaaf.
Maanta oo Jimca ah ayey si rasmi ah u shaaciyeen Guddiga farsamada & maamul dhisidda dawlad goboleedka Galmudug xubnaha cusub ee Baarlamaanka 2-aad ee dawlad goboleedka Galmudug oo ay [Read More]
SAWIRO:- Axmed Madoobe oo soo bandhig cudud meletery oo baaxad leh isagoona hanjabaad sameeyay.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta booqday deegaanka Cabdalla Biroole ee Gobolka Jubbada Hoose,halkaas oo ay fariisimo ku leeyihiin ciidamo ka tirsan Jubbaland. Madaxweynaha ayaa halkaas u [Read More]
January 10, 2020 marqaan 1
Ciidanka Soomaliland ee ku Sugan Duleedka Caroweyn Ayaa Ku Hanjabey Inay Weerarayaan Ciidamada Jabhada Xoraynta Sool,Sanaag Iyo cayn ee Dhawaan Iyagana Looga Dhawaaqay Buuhoodle. Qaar ka Mida Ciidan Ku Sugan [Read More]
January 9, 2020 marqaan 0
Koongarasku wuxuu mar labaad isku diyaarinayaa dagaal weyn oo lala galo maamulka Trump iyadoo madaxweynaha Mareykanka uu doonayo inuu dardar geliyo dhoofinta balaayiin doollar ee hubka Sacuudiga . Dadka dhaleeceeya [Read More]
Hamda Queen iyo walalkay marna seedigay Marwaan craxmaan oo meherkoodu sabtida dhacayo .
Xiisada Bariga Dhexe Ayaa Muujinaysa In Sida loo kala Awood Weyn yahay laysku Dilayo Aduunkani,Iran Waxaay Ugu Goodidey Sucuudiga Iyo Imaraadka inay Gacan Ka gaysteen Dilka taliyaha Iran. Wasiirka Arimaha [Read More]
January 9, 2020 marqaan 2
Madaxweyne Deni oo la hadlayey Idaacadda BBC, ayaa sheegay in odayaashii iyo siyaasiyiin Boosaaso lagu xidh-xidhay ee la xukumay aanu ku jirin ‘Oday dhaqan layaqaan’ “Dhaqanku uma xilsaarna heshiisyada- aan [Read More]
« 1 … 31 32 33 … 135 »